Somaliland oo QM iyo IGAD kala hadashay colaada ka taagan Sool | allsaaxo online
Somaliland oo QM iyo IGAD kala hadashay colaada ka taagan Sool
Maamulka Somaliland ayaa waxa uu sheegay in xubno ka socda Qaramada Midoobay iyo Urur goboleedka IGAD ay kala hadleen colaada ka taagan degaanka Tukaraq ee gobolka Sool, taasi oo u dhaxeysa Somaliland iyo Puntland.
Xubno ka socda QM iyo IGAD ayaa waxa ay gaareen magaalada Hargeysa, waxayna kulamo waqti badan qaatay la yeesheen Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Golihiisa Wasiirada, iyada oo kulanka looga hadlay colaada Sool.
Madaxweynaha Somaliland ayaa xubnahan u soo bandhigay sidii maamulkooda ay wada shaqeyn buuxda ula yeelan lahaayeen iyo sidii maamulka looga taageeri lahaa arrimo badan, waxayna dhinacyadan isla garteen sidii xal looga gaari lahaa dagaalka Tukaraq.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Sacad Cali Shire oo warbahinta faah faahin ka siiyay kulanka ayaa yiri “Qodobo dhawr ah oo ay ka mid tahay in xal laga gaaro colaada Tukaraq ayaa la isla soo qaaday, hadalka weli wuu socdaa, waxaan rajeyneynaa in wada hadalka guul laga gaaro”.
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali (Gaas) ayaa shalay sheegay in Puntland aysan wada hadal ka galeyn colaada Tukaraq, ilaa degaanada gacanteeda ka maqan ay dib ugu soo ceshato.